सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारी, कहिलेबाट खुल्ला त ? - Mitho Khabar
June 26, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on सार्वजनिक सवारी सञ्चालनको तयारी, कहिलेबाट खुल्ला त ?
काठमाडौँ, ११ असार । स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासन सकारात्मक रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले गृहसचिव र मुख्यसचिवसँग सल्लाह गरेर १३ गतेसम्म निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । महासङ्घले सार्वजनिक यातायातका चालक, सहचालकलाई अनिवार्यरुपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ
January 23, 2020 January 23, 2020 mithokhabar